Download Samsung USB Drivers ma chefuo Samsung Kies | Gam akporosis
Paul Aparicio | | Samsung, Nkuzi
Ogologo oge gara aga, iji wụnye Samsung ọkwọ ụgbọala USB ziri ezi na PC maka Samsung ama ma ọ bụ mbadamba Samsung, ọ dị mkpa iji wụnye ngwanrọ Korea a na-akpọ Kies. Ma ọ bụrụ na otu n’ime ihe ọma banyere gam akporo bụ nnwere onwe ya, gịnị kpatara ha ji chọọ ijikọ m site n’ịmanye m ịwụnye ụdị sọftụwia a na kọmputa m iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala? Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ maka Samsung ika mobile ngwaọrụ na kọmputa anyị iji kwurịta okwu, mgbe ụfọdụ ọ na-adị naanị mkpa wụnye Samsung ọkwọ ụgbọala
Na gam akporo anyị nwere ike nweta ihe ọ bụla ekele ndị mmepe obodo na mba, ọ dịghị mkpa iji wụnye Samsung Kies. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ naanị ndị ọkwọ ụgbọala, anyị nwere ike iwunye naanị ndị ọkwọ ụgbọala. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ebe ị ga-enweta ha na otu esi etinye ha ka ị wee nwee ike ịsị goodbye na ngwanrọ Samsung na-agba mbọ ịkwado anyị.
1 Gịnị bụ ihe na Samsung Kies maka?
2 Gịnị bụ Samsung ọkwọ ụgbọala maka gam akporo?
3 Ibudata ma wụnye Samsung USB Drivers
3.1 Iwepu nsụgharị ochie
3.2 Wụnye ngwugwu Samsung USB ọkwọ ụgbọala ọhụrụ
Gịnị bụ ihe na Samsung Kies maka?
Agbanyeghị na ntụnyere ahụ nwere ike jọ njọ, ma karịa na nke a nke m ga-eme, anyị nwere ike ịsị na Kies bụ a Samsung iTunes. Ọ bụ ezie na iTunes na-enyekwa ọrụ ndị ọzọ, iji jikwaa ihe ọ bụla na iPhone, dị ka ịgbakwunye egwu, akwụkwọ ma ọ bụ imelite usoro ahụ, anyị ga-eji iTunes, ngwá ọrụ m maara na ọtụtụ ndị ọrụ kpọrọ asị. Dị ka anyị na-agụ na akwukwọ ọrụ si Samsung, «Samsung Kies jikọọ mkpanaka gị na PC gị, na-eme ka mmekọrịta data dị n'etiti ngwaọrụ na ịchọta ngwa ọhụrụ".
N’uche m, na otu o si di mfe ikesa ihe ọ bụla na gam akporo, Echere m na a ga-ole na ole ọrụ ndị chọrọ iji wụnye Samsung Kies na ha na kọmputa na isiokwu a bụ iji nyere aka na nke a.
Download emelitere ọkwọ ụgbọala maka Samsung ọnụ
Gịnị bụ Samsung ọkwọ ụgbọala maka gam akporo?
Nke a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị uche na-ajụ anyị. A njikwa abụghị ma ọ bụ ihe na-erughị ọkwọ ụgbọ ala, mana ọ bụ okwu Spanish. RAE anaghị etinye okwu a "ọkwọ ụgbọ ala", mana ejiri ya rụọ ọrụ karịa mgbe anyị na-ekwu maka ịgbakọ karịa okwu "njikwa". Ọ dịka ịsị ma ọ bụ ide "PC", mkpirisi okwu pụtara "Kọmputa Nkeonwe" nke anyị na-agaghị eji na Spanish. N'ihe kachasị mma, ọ bụrụ na anyị ekwuo "Kọmputa" kama "Kọmputa," anyị ga - asị "Kọmputa nkeonwe," na - agbanwe usoro nke okwu.
A Driver (site na Ngwaọrụ Driver) ma ọ bụ Driver (site na Ngwaọrụ Driver) bụ obere mmemme kọmputa na-enye ohere a Sistemụ nrụọrụ na-ejikọ na mpụta (ngwa enyemaka ma ọ bụ nke nwere onwe ya ma ọ bụ ngwaọrụ ejikọrọ na CPU), na-ewepu site na ngwaike ma na-enye interface iji jiri ngwaọrụ ahụ. Tinye n'ụzọ dị mfe, maka sistemụ arụmọrụ iji nwee ike iji ngwaọrụ mpụga ọ bụla, ọ chọrọ sọftụwia pụrụ iche iji nwee ike ịgwa ya okwu. Ikekwe onye nke ọdụdụ anaghị echeta, mana afọ iri gara aga, iji nwee ike iji akụkụ ọ bụla, dịka a web camSite na kọmputa Windows, anyị ga-etinye sọftụwia na CD. Ma ọ bụghị ya, n'ọtụtụ oge, ọtụtụ (site na XP) ha chọpụtara na enwere igwefoto, mana ọ naghị arụ ọrụ. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ bịara na CD (ha ka na-abịa ụfọdụ ngwaahịa ugbu a) ga-eme ka igwefoto na-aga nke ọma.
Ibudata ma wụnye Samsung USB Drivers
Iwepu nsụgharị ochie
Tupu ịga n'ihu wụnye ọhụrụ version nke ukara Samsung ọkwọ ụgbọala, anyị nwere nhicha. Anyị ga-eme nhicha a site na iwepu nsụgharị ochie nke anyị nwere ike itinyeworị na kọmputa anyị. Iji mee nke a, anyị ga-eso usoro ndị a:
Anyị na-emeghe Windows Control Panel.
N'otu oge na Ogwe njikwa, anyị na-ahọrọ nhọrọ "Tinye ma ọ bụ wepu mmemme."
Ọzọ, anyị pịa ochie Samsung Mobile ọkwọ ụgbọala ngwugwu na mgbe ahụ na "Uninstall / Change". Anyị nwekwara ike ime nke a site na ịpị ngwugwu ọkwọ ụgbọala anyị chọrọ iwepụ.
Anyị na-eche na, mgbe iwepu usoro ahụ agwụla, anyị ga-adị njikere ịwụnye ngwugwu ọkwọ ụgbọala ọhụrụ.
Wụnye ngwugwu Samsung USB ọkwọ ụgbọala ọhụrụ
Ọ bụrụ na nhicha dị mfe, ịwụnye ngwugwu ọkwọ ụgbọala Samsung dị mfe karịa, ebe ọ bụ faịlụ a na-ebugharị. Niile ka anyi mee bu budata ha EGO, na-agba ọsọ na faịlụ na-eso kpaliri gosiri site nwụnye ọkachamara. Ọ bụrụ, maka ihe kpatara ya, ị wụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na njikọ gara aga na ịnweghị ike ịnweta ngwaọrụ Samsung gị, ị nwekwara nbudata ọzọ nke Samsung USB Drivers dị na EGO.
N'ọnọdụ ọ bụla, site na Windows 8 A na-emeziwanye ọkwọ ụgbọala nke ukwuu na ebe ọ bụ na 2012 enwekwaghị m mkpa ịwụnye ihe ọ bụla iji mee ka akụkụ ọ bụla rụọ ọrụ maka m na ọbụna ihe ndị dị n'ime. Ruo mgbe Windows 7 ọ dị mkpa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala (nke gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala maka eserese na kaadị ụda), mana ọ bụghị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị chọrọ imelite post a n'ihi na a ka nwere ọtụtụ n'ime gị nwere nsogbu ịnweta ekwentị Samsung gị na kọmpụta gị.
PC anaghị amata gam akporo m, kedu ihe m ga-eme?
You jisiri ike wụnye ya Samsung USB Drivers ma mee ka ha rụọ ọrụ?
Ozi ndị ọzọ - Samsung Galaxy S, melite site na odin na femụwe 2.3.6 na CF Root
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung USB Drivers
Ihe 60 kwuru, hapụ nke gị
Ogba 29 dijo
Maka mac i gaghi ama ebe m nwere ike ibudata ha..thanks
M hụrụ foto Francisco n'anya!
Okomoko, daalụ nyeere m aka nke ukwuu 🙂
Zaghachi Mootzo García
kedu ka m ga esi budata ya?
Na post bụ njikọ na njedebe na ederede
Njikọ ahụ agbajiri. Achọtaghi ya ma obu adighi. You nwere ike weghachite njikọ ahụ? Daalụ
Zaghachi Nexus Gala
Naanị ihe m chọrọ ekele
Ndewo Francisco, ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị a na-enyere m aka ịgbanye ssam galaxy s3 na mmemme unlockroot, a dị m ọhụrụ na nke a ma achọrọ m ịme ihe niile n'ụzọ ziri ezi na-enweghị njehie ọ bụla.
Ee, ha dị ha mkpa maka komputa ahụ ịmata nghazi gị nke ọma yana ọrụ ya niile.
o adabara samsung galaxy GT-S5360L?
Echere m na ọ na-arụ ọrụ maka Samsung Galaxy smartphones niile na 13/02/2013 10:03, "Disqus" dere, sị:
Enwekwara m GT-S5360L na PC m amataghị ya na ndị ọkwọ ụgbọala awụnyere…: /
Zaghachi José Martínez
Enwere m otu nsogbu ahụ na enweghị m ike ịhụ otu esi ehichapụ ekwentị m na pc ...
Zaghachi ruo titi
Enwere m otu nsogbu ahụ! D: amm enweghị ike ịchọta BCM21553-Thunderbird na CDC Abstract Control Model: C
Zaghachi Micheel Mtz
hi francisco, enwerem ihe ace gt-s5830m, mana pc m amaghi ya. ma ọ bụ na kies na m na ugbua ebudatara Samsung USB ọkwọ ụgbọala na ihe ọ bụla, dị ka m na-eme iji mata cel. Daalụ nke ukwuu maka nnukwu enyemaka gị. ekele sitere na cozumel
ị nwere ike idozi ya? Otu ihe ahụ na-eme m
Zaghachi carolina ficco
enwere ike ị nye anyị nkuzi etu esi eji ya
Zaghachi ka edwin
Enwere m ụyọkọ kpakpando ma ọ bụghị ma ọ bụ nke a anaghị amata ekwentị m n'ụzọ ọ bụla
Ọ ga-arụ ọrụ maka mbadamba Samsung galaxy mgbata 7.2 gt p3113?
Aghọtara m ihe ị na-ekwu na ekwentị anaghị amata m
Zaghachi ka pepe
daalụ mfe ọ nweghị ike ịbụ ...
Saved zoputara m .. hehe ugbua oburu na m puru ihu cell m ma oburu na m choro samsung kies
Zaghachi galaxi mini
Emeworị m na mbụ ma ọ rụọ ọrụ mana ugbu a ọ naghị arụ ọrụ mmadụ nwere ike ịgwa m ihe kpatara ya biko
Zaghachi Miguel Amezquita
Ezigbo nkwado enyi, ọ rụrụ ọrụ m nke ọma. Ọ na-ekele.
Ihe ngosi, dị mfe ma na enweghị ọtụtụ laps, ọ na-amata ekwentị gị na-enweghị ntinye nke Samsung Kies ... onyinye dị oke mma ma daalụ nke ukwuu ...!
Zaghachi Mariano + Arg +
Daalụ, !!!!!! M na-emepe windo ka dobe ekwentị !!!
You nwere ike ịgwa m ka usoro ndị ahụ si dị ... ya bụ, m ga-ejikọ kọmputa m na eriri USB tupu ị wụnye ya ma ọ bụ otu esi, Emebeghị m nke a: S
nwalere na samsung galaxy ace na-aru oru nke oma
Zaghachi ka rano
Ogbo 53 dijo
Ebee ka njikọ ahụ dị
Zaghachi na adhal53
Mmụọ ozi pichardo dijo
Ndewo, abụrụ m ihe ọhụrụ na nke a, ọ ga-amasị m ịmara ma ị ga - ekpebi etu ị ga - esi wepu onye ọrụ ya na samsung 5560
Zaghachi Angel Pichardo
Enwere m ekwentị Sansung S4 nke m na-ehichapụ ụfọdụ faịlụ na mberede nke o doro anya na ha bụ ndị na-achịkwa WIFI, TV na nnabata nke ngwa iji wụnye na ekwentị. Olee otu m ga-esi tinye ekwentị m ọzọ ma ọ bụ detuo ndị ọkwọ ụgbọala ahụ azụ?
kedu ka esi etinye ha na android?
Jizọs Martinez Hernandez dijo
francisco nsogbu m bụ na m sansung galaxy s2 achọghị ka jikọọ na pc na m nwere ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere na m gbalịrị ihe ọ bụla na ụzọ dị iche iche na ọ na-achọghị ka jikọọ m sansung galaxy bụ enweghị a mgbawa na version nke m android bu 4.0.4 nyere m aka amaghizikwa m ihe m g’eme ijikoo ekwentị m na PC
Zaghachi Jesus Martinez Hernandez
kedu ka m ga esi esi wughachi ihe nile di na galaxy note 2?
Daalụ nke ukwuu, enwere m nnukwu nchegbu, ọ na-arụ ọrụ zuru oke, ị dị mma 😀
Ezigbo enyi, imeela nnọọ. Ọ fọrọ nke nta ka m nwee nne awọ na-acha akwụkwọ ndụ na nne a ruo mgbe ọkwa gị nyeere m aka kelee gị.
Zaghachi Rafael Hernandez Uribe
o jeere m ekele ụmụ nwoke
Zaghachi Everardo Garcia Vazquez
hello mgbe m na-etinye usoro ihe omume ọ na-agwa m ka mkwupu ngwaọrụ ma ọ naghị ejikọ. i nwere ike inye m azịza xfa
Ugbokodo 87 dijo
Ọ ga-arụ ọrụ maka Samsung SGH-i677 ??? Enweela m achọ ihe niile ma enweghị m ike ịnweta pc m ịmara ekwentị !!! ...
Otu ihe ahụ na-eme m, ị maara ka esi edozi ya?
Enwere m olileanya na ha ga-arụ ọrụ maka Samsung galaxy tab 3 lite
Zaghachi Juan E. Viveros
na m galaxy eto eto gt-s6310l naanị akpaka playback na-egosi ma ọ bụ naanị na otu nhọrọ «Nyefee faịlụ» iji windo media player…. fuck ¬¬
Ndewo, m ga-achọ ịma usoro iji budata foto site na ekwentị m na kọmputa m nke nwere ụdị wimdows xp. M jikọọ ekwentị na kọmputa na ngwaọrụ anaghị agụ m. dika m si eme?
MILIANO A. dijo
Zaghachi MILIANO A.
Daalụ nke ukwuu maka onyinye gị. Ọ bụ naanị na peeji ebe m mechara jisie ike ijikọ ekwentị m na PC. Ekele m ọzọ, daalụ
Ana m ebudata ya na ekwentị m, ma ọ na-agwa m na enweghị m ike imeghe ya, mgbe m chọrọ ijikọ ya na pc m ọ na-ekwu na ọ maghị ya
Daalụ maka onyinye, kwenye m, ọ nyeere m aka nke ukwuu… !!! XD
Azụrụ m Samsung Ace S-5830-M ihe dị ka afọ abụọ gara aga, ọ nyeghị nsogbu ruo mgbe ọnwa ole na ole gara aga, akpọrọ m ya na ọrụ teknụzụ ma ha gwara m na ọ nwere mgbọrọgwụ Samsung Young GT-S-5360-L. .
Dị ka ekwentị a tụgharịrị bụrụ, ọ ga-amasị m ịdebe ya ma jiri ya mee ihe n'ezie. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Oge ọ bụla m gbanyere ya, akụkụ nke ihuenyo ahụ dị ka a ga-asị na ọ mebiri emebi na igbe Samsung Young GT-S-5360-L.
Ezi onyinye enyi, daalụ maka ịkekọrịta.
Zaghachi Joaquín Bresan
Morningtụtụ ọma, ọ na-eme na m galaxy s3, na táticl na-egbochi maka mementos na mpaghara ala nke mobile na-ekpo oke ọkụ, ụfọdụ ndị enyi na-agwa m na ọ ga-abụ aka, mana mpaghara ahụ dum na-arụ ọrụ, onye ọzọ na-adụ m ọdụ gbanwee sistemụ arụmọrụ, m ga-enwe ekele maka enyemaka na nke ahụ, ekele
Ndewo Francisco, aha m bụ Hernán, Abụ m Venezuelan. Enwerem Galaxy S4, aghaghi m ihichapu ufodu ihe gam akporo. Mgbe m gbanye ekwentị, ọ naghị akwụsị buut, ọ na-anọ na bọl ọcha na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ, m na-ewepu batrị ahụ, tinye ya azụ ma mgbe ụfọdụ ọ na-agbanye ma na-enweghị "aka" na-arụ ọrụ, n'oge ndị ọzọ " aka "na-arụ ọrụ ma ọ bụghị mkpọtụ mgbe ị slide mkpịsị aka gị na ihuenyo ma ọ bụ na-akụ, ndị ọzọ ihe niile na-arụ ọrụ ma n'ihi na a nkeji ole na ole na mgbe ahụ na ọ na-ekpe na-enweghị aka
Zaghachi Hernán Rendón
I bu n’ezie eze ndi eze.
Bdia, ebudatara m SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones (3) mmemme, mana sistemụ kọmputa m na - egbochi ya (Windows 10 n'ụlọ), ọ na - ekwu "Onye nchịkwa egbochisịrị ngwa a", m na - agbakwa ya dị ka onye nchịkwa ma deactivating nchebe mgbidi ahụ, ụfọdụ ntụnye. inwe ike ijikọ Samsung Samsung-GT-S5570L m, daalụ
Zaghachi Marcelo P
Jairo Bermudez kwuru dijo
Zaghachi Jairo Bermudez
Ọfọn, Ọ dị m nwute na ekwetaghị na nkọwapụta nke edemede a, echere m na enwere ike ịrụkwu ọrụ ... ihe mbụ, ọ dị m ka ọ na-egbu m na ị tinyere ndị ọkwọ ụgbọala na sava nbudata na-anaghị akwụ ụgwọ dị ka ebugo, na mgbasa ozi niile n'ụwa, iji nweta ha, nke abụọ, na-egosi na ọ bụ ngwugwu ọkwọ ụgbọala ọhụụ, na-enweghịdị ụdị nke ikpeazụ, nke a kwụbara bụ 1.5.9.0 ma ha abanyelarịrị na 1.15.51.0 .XNUMX, na nke atọ, njikọ ebe bụ nsụgharị ọrụ ma na-ebipụta, site na samsung development team, bụ ebe a:
na-enweghị na-eche maka ngwa ngwa download jupụtara mgbasa ozi, dị ka ihe m na-egosi na isi abụọ
Zaghachi Jose Sierra Diaz
daalụ chukwu maka ihe niile
Zaghachi jose miguel
Daalụ nke ọma, zuru oke. Otu nde
Andrew Mendoza dijo
Emechara m ihe niile, mana windo 7 anaghị amata S2 m. Enwere m ụdị 4.1.2 arụnyere. Enweghị m Kies arụnyere, naanị Wondershare Mobile.
Ọ na-agwa m ngwaọrụ ahụ amaghi, mana agbanyeghị na ekenyela m ebe ndị ọkwọ ụgbọala SAMSUNG dị, ọ naghị anabata ha ma gaa n'ihu na-ekwu na ngwaọrụ amaghị.
Agbalịrị m ọtụtụ eriri ma ọ bụrụ na ha achọpụta mobiles ndị ọzọ, mana ọ bụghị nke a.
Ha ga-enwe ekele maka ihe m nwere ike ime iji chọpụta ya.
Zaghachi Andres Mendoza
Ndewo, enweghị m ike ịhụ faịlụ nke Huawei p9 na TV site na eriri USB, ọ na-akụ m na ọ bụ ajụjụ ọkwọ ụgbọ ala.
JESUS ​​M. MARTINEZ H. dijo
ihe m na-eme bụ na m na-ehichapụ kọntaktị na samsung galaxy j7 (2016).
sm-j710mn achorom iweghachi ha. Agụrụ m ya na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ enwere m ike nyochaa ebe nchekwa dị n'ime ma weghachite ha. mana otu esi eme ya n'ezie.
Enweghi m ike ịme ya na ha dị mkpa. Enwere m ekele maka enyemaka gị
M arụnyere ihe ma ọ dịghị ihe m rụzuru
Zaghachi JESUS ​​M. MARTINEZ H.
Site na nke a enwere m ike, mana enwebeghị m ike nweta ya, amaghị m etu esi eme ya.
Download Samsung USB Drivers ma chefuo Samsung Kies
http://www.androidsis.com ›Ekwentị mkpanaaka na› Samsung
Na ndị ọrụ a Samsung USB ọkwọ ụgbọala ị nwere ike ijikọ Samsung ngwaọrụ na kọmputa gị na-enweghị iji Samsung Kies. Budata ndị ọkwọ ụgbọala ebe a.
A ga-enye Xiaomi Mi 5X na July 26 tinyere MIUI 9
Zụrụ HOMTOM HT50 maka ihe na-erughị euro 90